Ko Gyi Zein's Ho-sat-sat D-sat-sat: ပင္ပန္းဆင္းရဲေသာအလုပ္သမား (Laborious Working worker)
ပင်ပန်းဆင်းရဲသောအလုပ်သမား (Laborious Working worker)
Laborious Working worker ကို ပင်ပန်းဆင်းရဲသောအလုပ်သမားလို့ ဘာသာပြန်ချလိုက်တယ်။ ကိုက်ရဲ့လားမသိဘူး။ ပင်ပန်းဆင်းရဲသောအလုပ်သမားများဆိုရင် ပြေးမြင်မိတာက ဈေးထဲက ကုန်ထမ်းသမားကြီးတွေ..လယ်သမား ယာသမားကြီးတွေ..တနေ့ဝမ်းစာအတွက် ပင်ပန်းတကြီး ရှာဖွေလုပ်ကိုင်ကြရတဲ့သူတွေ.. အောက်ခြေလူတန်းစားတွေပေါ့.. တကယ်ပါ သနားဘို့ကောင်းပါတယ်။
အိုင်တီနယ်ပယ်ထဲမှာကော ဒီလို ပင်ပန်းဆင်းရဲသောအလုပ်သမားမရှိဘူးလား။ သိပ်ရှိတာပေါ့ဗျာ။ စာစီစာရိုက်သမားတွေပေါ့။ စာစီစာရိုက်ကလွဲလို့ ဘာမှ တတ်စရာမလိုတော့ လုပ်ခကလည်းနည်း၊ စာမျက်နှာတွေ အများကြီးရိုက်မှ မစို့မပို့ ရကြတာလေ။ ဒါတောင် ဆိုင်ရှင်ကို ရှယ်ယာခွဲသင့် ခွဲပေးရသေးဆိုပဲ။ မိသားစုကြီးရင် နေ့နေ့ညညရိုက်မှ ခါးဝတ်လှရုံ လူမျိုးပေါ့ဗျာ..မရှိဘူးမထင်နဲ့နော် အများကြီးရှိတယ်။ စာစီစာရိုက်ဆိုင်ပဲမဟုတ်ပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိကရုံး၊ အစိုးရရုံးတွေမှာလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေးအတိုင်းအတာအရ ပြောရလောက်အောင် မဆင်းရဲပေမည့် အသကုန် ဟိုလူ့စာရိုက်၊ ဒီလူ့စာရိုက်နဲ့ အရမ်းပင်ပန်းတဲ့ အလုပ်မျိုးပေါ့။
ဒါက ဘယ်နိုင်ငံမှာ မဆို ဒီလို အလုပ်သမားမျိုး ရှိနေပါတယ်။ အနေအထားလေးတော့ ကွာတာပေါ့နော်။ ဒီက လူတွေက စာကို အစအဆုံးရိုက်ကြရမယ်။ ဟိုက လူတွေက ဖောင်ပုံစံမှာ အချက်အလက်တွေပဲ ဖြည့်ရမယ်။ ကျန်တာ ဆော့ဝဲက processing လုပ်သွားမယ်။ Data Entry လို့ခေါ်မှာပေါ့။ သူရို့နိုင်ငံမှာတော့ ဒီလို Data Entry ဖြည့်ရုံလောက်လုပ်ရတဲ့ သူမျိုးကိုတောင် ပင်ပန်းဆင်းရဲသောအလုပ်သမားများလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဝန်ထမ်းမျိုးကိုလည်း မျက်ကွယ်မပြုပဲ မေတ္တာထားကြပါတယ်။ မယုံရင် Google မှာ Laborious Working Worker လို့ ရှာကြည့်ပါ။ ဘာတွေ့မလဲလို့...။ ဒီက စာစီစာရိုက်သမားတွေလိုသာ အစ-အဆုံး ရိုက်နေရရင် ဘယ်လို သဘောထားကြမလဲ မသိဘူးနော်။ ဒီလိုကွာပါတယ်။ စဉ်းစားစရာ ပေါ်လာတာက ဒီကလူတွေ အလုပ်ပိုတွေ လုပ်နေရတာပဲ။ ဥပမာ ပေးပါမယ်။
ရုံးတစ်ရုံး ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ဘဏ်ကို ငွေလွဲဘို့ ရေးတဲ့စာ တစ်စောင် မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကျကျနန စာတစ်စောင်ပေါ့။ ဒီမှာတော့ နမူနာ အဖြစ်သဘော ရေးပြပါမယ်။ (ကြိုပြောထားရဦးမယ်။ မည်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ။ တိုက်ဆိုင်မှု ရှိလျင် ခွင့်လွှတ်ပါ..လို့)
အထက်ပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ [အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်] ကျွန်တော့်၏ ငွေစာရင်းမှ အောက်ပါအတိုင်း ငွေလွှဲခွင့်ပြုပါရန် လျောက်ထားပါသည်။
ပမာဏ [၂၀၀၀၀၀.ဝဝ စာဖြင့် နှစ်သိန်းတိတိ]
ဒီလို ငွေလွှဲမှုမျိုး အမြဲရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဒီလိုစာမျိုးကို Laborious Working worker တစ်ယောက်က မကြာခဏ သီကုံးပေးရပါမယ်။ စာကို အစအဆုံး ပြန်ရိုက်နေရရင် ဒါ အလုပ်ပိုလုပ်နေရတာပါပဲ။ Redundant Work ပေါ့နော်။ တကယ်တမ်း လိုအပ်တာက လေးထောင့်ကွင်းတွေထဲက အချက်အလက်လောက်ပဲလေ။ အစအဆုံး ပြန်မရိုက်ပဲ ccp (Copy-Cut-Paste) လုပ်နေတယ် ထားဦး ဒါ ဖိုင်တွေ ပွထ နေမှာပါပဲ။ Data Redundancy ပေါ်နေပီပေါ့။ ဘယ်လိုမှ မကောင်းပါဘူး။ သူရို့နိုင်ငံ (အဲ ခေတ်မှီတဲ့ အဖွဲ့အစည်း Organization တွေကျတော့) ဆော့ဝဲသုံးတယ်ဗျာ။ လူကို (Laborious Working workerကို) အချက်အလက်လောက်ပဲ ဖြည့်ခိုင်းတယ်။ နောက် ဖြည့်ပီးတဲ့ Data ကို ပုံစံချထားတဲ့ ဖိုင်ထဲ ထဲ့လိုက်ရင် လိုချင်တဲ့ စာတစ်စောင်ရပီပေါ့နော်။ ဒီ Data သာရှိနေပါစေ။ နောင် အချိန်မရွေး အချိန်မဆိုင်းပဲ အလားတူ စာတစ်စောင် ပြန်ထုတ်လို့ ရမယ်။ ဖြည့်လာခဲ့တဲ့ Data Entry တွေကို တောက်လျောက် ကျစ်လစ်စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်။ ဒါ Laborious Working workerချင်းအတူတူ Data Entry သမားရဲ့ အားသာချက်ပါပဲ။ ဒီလို ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ Data Entry တွေ သိမ်းထားတဲ့ နေရာကို Database (ဝါ) Datastore လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြန်ထုတ်တဲ့ report ကို အပေါ်က နမူနာနဲ့ ပြောရရင် mailmerge လုပ်တယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဒီက Organization တွေကို ဒီလို စာတွေ ဗျောက်သောက်ရိုက်နေမည့်အစား Database တစ်ခုခုကို သုံးပြီး စံနစ်ကျကျ operate လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Organization အများစုမှာ အားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံကုန်မှာ ကြောက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါလေးများ ရုံးကလူတွေရိုက်ခိုင်းလာတာပဲ။ သူတို့ကို ဒီကိစ္စ ခိုင်းဘို့ပဲ ခန့်ထားတာပဲ ပေါ့ဗျာ။ ကိုယ့် Organization၊ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းရဲ့ status ကို ဒီနည်းနဲ့ မြှင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုတာကို လျစ်လျူရှုကြတာများပါတယ်။ ရုံးတစ်ရုံးမှာ ကွန်ပျူတာ တပ်ဆင်ဘို့ဆိုရင် ကွန်ပျူတာဝယ်ပီး ခိုးကူခွေနဲ့ Windows ကိုတင်တယ်။ Hardware Cost သာသာနဲ့တင် အလုပ်ဖြစ်နေကျတော့ တခြား Operating Cost ထဲမှာ Database ကို ထဲ့ဘို့ကို မေ့ထားကြတယ်ပေါ့ဗျာ။ တကယ်တမ်းပြောရင် Operating System ဆိုတာ ဝင်းဒိုးသက်သက်ဖြစ်နပြေီး မိမိ Organization၏ Operating System က ဘာလဲဆိုတာကို မျက်ကွယ်ပြုထားသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာကလည်း ဒီကလူတွေ ဒီကိစ္စကပ်စေးနည်းတယ် ဆိုတာ သိကြတော့ အပြင်က outsourcing တွေပဲ ရေးကြတာပေါ့။ ဘာလို့လဲ ? စာစီစာရိုက်ကို ကူညီမည့် ဆော့ဝဲလေ ? မလိုပါဘူး Microsoft Word ရှိပီးသားပဲ ဆိုတော့။ အသိ understanding နည်းတော့ အပင်ပန်းခံပြီး ရေးပေးလည်း သိပ်မထူးဘူးဆိုတာ နားလည်နကြေလို့ပါ။ ဘယ်အရာမှာ မဆို တူညီသော တုံ့ပြန်ချက်ရတယ် လို့ ခံယူမယ်ဆိုရင် ဒီလို ဆော့ဝဲ ပေါက်စကလေးတွေ ရေးတာလည်း တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုခုတော့ လိုချင်ကြပါတယ်။ ဘာမှမရရင် အနည်းဆုံးတော့ ခင်မင်မှု မေတ္တာပေါ့ဗျာ။
စာလည်း သိပ်မရေးတတ်ဘူးခင်ဗျ။ ရေးနေရင်း လိုရင်းက ချော်သွားတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ ဆိုလိုရင်းက..
၁) အိုင်တီနယ်ပယ်မှာ Laborious Working worker တွေရှိကြောင်း ပြောချင်တာရယ်
၂)၎င်းတို့၏ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးစေချင်တာရယ်
၃) အလုပ်ပိုလုပ်နေရတဲ့ သူတို့၏ workload ကို လျော့ပေးစေချင်တာရယ်
၄) mailmerge ကို သုံးသင့်တယ်ဆိုတာလေး ဖောက်သည်ချချင်တာပါ။
(စိတ်ဝင်စားရင် ကျနော် mailmerge လုပ်နည်းကို အခြားပို့စ်မှာ ထပ်ဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။
mailmerge ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ပေါ့။ ဒါ ကျနော် တကယ်တတ်တဲ့ Field မို့ပါ။)
Posted by Ko Gyii at 12:29 AM
Labels: database , Laborious Working worker , mailmerge , အိုင္တီ , အေထြေထြ ဗဟုသုတ , ေဆာ့ဝဲ